एडोल्फ हिटलर : जसलाई आमा गर्भमै तुहाउन चाहन्थिन् ! - Lekbesi Khabar
एडोल्फ हिटलर : जसलाई आमा गर्भमै तुहाउन चाहन्थिन् !
सन् १८८९ अप्रिल २० का दिन एडोल्फ हिटलर जन्मेका थिए । जर्मनीको सीमा छेउ अस्ट्रियाको सानो गाउँ ब्राउनाउमा उनको जन्म भएको थियो । हिटलरको परिवार सहज जीवनको खोजीमा फेरि अर्को ठाउँमा सर्‍यो । त्यसपछि लगत्तै हिटलर ६ महिनासम्म बेनेडिक्टको धार्मिक आश्रममा बसे । जहाँ धार्मिक व्यक्तिहरु मात्र बस्थे । त्यस आश्रममा बस्ने सन्तहरुले लगाउने कोटको बाहुलामा एउटा चिन्ह अंकित हुन्थ्यो । त्यस चिन्हलाई स्वस्तिका भनिन्थ्यो ।
सानोमा एडोल्फको सपना धार्मिक पण्डित हुने थियो । बाल्यकालभरि एडोल्फ हिटलरलाई उनका बाबुले पिटे । यो विषयमा एक व्यक्तिले भनेका थिए, ‘अनुशासनको लागि यसो गरिएको थियो। तर, यो राम्रो तरीका थिएन ।’ एलोइस आफू जस्तै अरु पनि आज्ञाकारी हुन् भन्ने आशा गर्थे । उनी आफ्ना छोरा-छोरीलाई अह्राउने गर्थे र सो अनुसारको कामको पनि आशा गर्दथे । प्राइमरी स्कुलमा हिटलरले अति राम्रो गरे र अति नै राम्रो शैक्षिक भविष्य देखाए । उनको अगाडि उज्ज्वल भविष्य देखिन्थ्यो ।
उनी आफ्ना अन्य सहपाठीमाझ लोकप्रिय थिए र आफूभन्दा ठूलाबाट प्रशंसित हुन्थे । सबैभन्दा ठूलो कुरा त आफ्नो ‘नेतृत्व क्षमता’को विलक्षण प्रतिभा उनमा देखियो । उनी अति धार्मिक प्रवृत्तिका बच्चा थिए । उनले आफू सन्त बन्ने कुरा पनि सोचे । त्यही बेला हिटलर परिवार अस्ट्रियाको एक शहर ‘लामवेक’ मा सरे । त्यो ठाउँ लिन्ज र सजबर्गको बीचमा पथ्र्यो । हिटलरलाई यसरी सर्नुको अर्थ थियो, खेतको कामबाट मुक्ति पाउनु र खेल्न धेरै समय पाउनु । त्यहाँ पनि हिटलर स्कुल जान थाले र स्कुलमा उनले राम्रो गरे । उनी एक धार्मिक स्कुलमा भर्ना भएका थिए ।
उनले त्यहाँ गीत गाउने केटाहरुको कोरसमा भाग लिए । उनी गीत राम्रो गाउँथे, भनिन्छ उनको राम्रो स्वर थियो । वर्षौंपछि हिटलरले भनेका थिए, ‘कुनै चाड, उत्सव र क्याथोलिक समारोहहरुमा उनी अति नै उत्साही र खुशी हुन्थे र पछि उनमा त्यसको गम्भीर असर पर्‍यो ।’ हिटलरको परिवारले अचानक एक वियोगको सामना गर्नुपर्‍यो । उनका भाइ एडमण्डको ६ वर्षको उमेरमा दादुराको कारण मृत्यु भयो । बच्चा एडोल्फ जो युद्धसम्बन्धी खेल खेल्न रुचाउँथे र काल्पनिक मृत्युको खेल खेल्थे । तर यसरी पहिलोपल्ट वास्तविक मृत्यु देखे । यसले एडोल्फमा गम्भीर असर पर्‍यो ।
उनका बाबुले उनलाई कहिल्यै भेट्टाएनन् । त्यो बेला एडोल्फ मात्र ७ वर्षका थिए । उनका बाबुले एडोल्फलाई पनि त्यही व्यवहार दोहोर्‍याए । सन् १९०० सम्ममा हिटलरमा एक कलाकारको गुण देखियो । उनले युनिभर्सिटीको तयारी राम्ररी गरे । उनी त्यसको लागि योग्य पनि भए । हिटलर रिलसुलमा भर्ना हुने उनको बाबुको निर्णयमा सहमत भए । उनका साथी कुविजेकको भनाइ अनुसार जर्मन संगीतकार रिचार्ड बाग्नरले प्रस्तुत गरेको गीत ‘रिन्जी’ हेरेपश्चात हिटलरले दुष्टात्माले प्रभाव पारेकोजस्तो व्यवहार देखाउन थाले । हिटलरले आफ्नो साथीलाई भिरालो पहाडको चुचुरोमा पुर्‍याए र आफ्नो ‘ग्रेट मिशन’बारे अनौठो श्वरमा कुरा गरे, जुन मिशन थियो, मानिसलाई स्वतन्त्रता दिनु । ठीक त्यस्तै, उनले ओपेरामा देखेका थिए ।
हिटलरले पहिलो ओपेरा १२ वर्षको हुँदा हेरेका थिए । उनको अर्को महत्वपूर्ण चाख देखियो, त्यो समयमा, त्यो हो जर्मन राष्ट्रवाद । उनी अष्ट्रियन राजतन्त्रको विरुद्धमा थिए । एडोल्फ हिटलर र उनका साथीहरुले जर्मन अभिवादन हेल भन्न रुचाउँथे । र जर्मन राष्ट्रिय गीत “डचल्याण्ड उबर एलेस” गाउँथे । तर, हिटलरका बाबुले अष्ट्रियन साम्राज्यवादीको सेवा गरेका थिए र हेपवर्ग राजतन्त्रप्रति बफादार थिए । शायद उनी अन्जानमै आफ्नो विद्रोही छोराको बफादारिता ‘जर्मन केसर’ प्रति अर्पण गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका थिए ।
हिटलरलाई लाटोकोसेरो पनि भनिन्थ्यो । उनी राति अबेरसम्म पनि सुत्दैन थिए । उनी राति घरबाहिर निस्किएर हिंड्थे । जब हिटलर अठार वर्षका भए, उनले आफ्नो बाबुको सम्पत्ति प्राप्त गरे । त्यो पैसाले हिटलर “कला” पढ्न भियना गए, हिटलरले एकेडेमिज स्कुल अफ पेन्टिङ्गमा दुई दिनको प्रवेश परीक्षा दिए । अति नै आत्मविश्वासका साथ रिजल्टको प्रतीक्षा गर्न थाले । उनी स्कुलमा प्रवेश पाउने कुरामा ढुक्क थिए । तर उनी प्रवेश परीक्षामा फेल भए । बिजुली चम्केजस्तो महसुस गरे उनले । उनले बनाएको पेन्टिङबाट जजहरु सन्तुष्ट भएनन् । त्यसकारण उनी फेल भए । यसले हिटलरलाई अति नै असर पर्‍यो ।
प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटिस सैनिकहरूले एक घाइते जर्मन सैनिकको ज्यान बक्सिस दिएका थिए । ती भाग्यमानी सैनिक अरू कोही नभएर हिटलर नै थिए । त्यसपछि उनले छानी-छानी यहुदीहरू सिध्याउन सुरु गरेका थिए । उनी यहुदीलाई सखाप पार्न चाहन्थे ।
आधुनिक विश्वमा हिटलर नै यस्ता पहिला व्यक्ति थिए, जसले धुम्रपानविरोधी अभियान सुरु गरे । अर्को कुरा, मारकाटको राजनीति गरेका हिटलर मांसाहारी थिए होलान् भन्ने धेरैको अनुमान हुन सक्छ । तर, उनी शाकाहारी थिए । उनले पशु क्रूरताविरुद्ध कानून पनि बनाएका थिए । हिटलरलाई ड्रग्सको लत बसेको थियो । उनी प्रत्येक दिन ८० प्रकारका ड्रग्स सेवन गर्थे । उनको स्वास्थ्य धेरै बिग्रेको थियो । हर समय शरीर काँप्ने गथ्र्यो । उनी आइड्रपमा पनि १० प्रतिशत कोकिन मिसाउँथे । उनी पेट फुल्ने समस्याबाट ग्रस्त थिए । यसबाट छुटकाराका लागि उनी २८ प्रकारका औषधि सेवन गर्थे ।
सन् १९३३ मा हिटलरले जर्मनीको सत्तामाथि कब्जा जमाए । त्यसपछि उनको राज्य बिस्तारको अभियान सुरु भयो । उनले आफ्नो विरोधीहरुमाथि अत्यन्तै क्रुर व्यवहार गरे । राज्य बिस्तारका क्रममा उनको सेना बर्लिनको पर्खासम्म पुग्यो, जहाँ स्टालिनको रुसी सेना थियो । उनको राज्य बिस्तार अभियान जर्मन अन्धराष्ट्रवादको द्योतक थियो । उनकै कारण सन् १९३९-१९४५ को दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो । विश्वविख्यात तानाशाह हिटलरको मृत्यु सन् १९४५ अप्रील ३० का दिन भयो ।
६ कार्तिक २०७६, बुधबार १७:४२ October 24, 2019
काठमाडौं तारकेश्वरस्थित बोर्डिङ स्कुलको छानो खस्दा ३९ जना विद्यार्थी घाइते
दुर्घटनामा परी चालक घाइते